Famous abadlali movie ayatholakala cishe kuwo wonke amazwe emhlabeni. Phela, ama-movie kuthiwa esingu manje cishe kuyo yonke indawo. Kodwa kukhona usaziwayo umhlaba wonke, into ngazo futhi kuzoxoxwa ngakho esihlokweni sethu.
Siqala indaba bethu Hollywood megastars. Okunjalo abadlali abadumile njengo:
URobert De Niro;
Tom Kruz nokunye. D.
Bonke zaziwa nabathandwayo hhayi kuphela e-America kodwa futhi kwamanye amazwe. Kodwa akupheleli lapho amagama ukuthi siyaya yini ukusho. Phela, kukhona abadlali owaziwa amabhayisikobho eziye zithandwe muva nje, sibonga esikhanyayo ashisa izikhotha evusa amadlingozi izingane, intsha kanye nabantu abasha. Esokuqala Deniel Redkliff, usezuze udumo sibonga Starring Harry Potter namafilimu.
Libuye omunye owaziwa kakhulu futhi ethembisayo abasha American ifilimu abadlali manje sezibhekwa njengezindawo Robert Pattinson futhi Taylor Lautner. Baletha inkazimulo Saga odumile eyayisekhanda lami kanye werewolves ka "Twilight" futhi kumdlalo walo.
Movie izinkanyezi yeYurophu
Abadlali edume kunazo eFrance nase-Italy: uJean-Paul Belmondo, u-Alain Delon, Per Rishar, Zherar Deparde, Jean Reno, Louis de Funes, uMarcello Mastroianni futhi Adriano Chelentano kwakungasehlane laseBeti isiqongo ukuthandwa phakathi nawo ukuba kwekhulu lamashumi amabili.
Kodwa kwaba kakhulu kangakanani impumelelo yabo! Kuze kube manje, abaningi bethu enkulu ukubukela funny amahlaya afaka inimitable nosomahlaya French Lui De Funes - "Fantomas", "Amaphoyisa kanye njengabafokazi", "Long Walk". Futhi abangakwazi ukhohlwe Ngohlelo sikaRichard Depardieu ku ahlekisayo "esibi" futhi "Baba"?
Namuhla, phakathi kwezinkanyezi movie waseFrance kunabaningi kangaka izinkanyezi emhlabeni. Kodwa amagama amaningana ethandwa, thina namanje ukuyibiza ngokuthi - kuyinto UGaspard Ulliel ( "A Engagement Long kakhulu," "ulahleke", "The Last Day", njll "Hannibal okwenyuka.") Futhi Vincent uCassel (Kuhle Isithombe: "aphazamisa "," imifula Crimson "," efulethini "," inzondo "," Monk "," awushintsheki ").
abadlali Russian abadumile
Ngokwazi kwethu ethandwa movie stars, kungenzeka ke kubala i isibalo esingapheliyo amagama, ikakhulu uma ucabangela ebhayisikobho eqinile zaseSoviet Union ngaphandle kokuphazanyiswa. Lokhu Oleg Strizhenov, Oleg Yankovsky, futhi Andrei Mironov, futhi Savely Kramarov noGeorge Vitsin; Oleg Dal, Alexander abdulov, Vyacheslav Tikhonov, Yevgeny Leonov, u-Alexei Batalov, evgeniy Evstigneev, Yuri Nikulin, leonid Kuravlev, Yuri Yakovlev nezinye nabantu abaningi abahle kakhulu, bathandekayo futhi abanamakhono, ukudala izithombe esimnandi kakhulu ebhayisikobho Soviet.
Kodwa wena kungenzeka nesithakazelo nabalingisi owaziwa isiRashiya, abakhuthalele isuswe namuhla futhi ube nedumela eyanele lapha kuphela kodwa futhi kwamanye amazwe. Ngeshwa, uhlu akuyona enkulu kakhulu, zingabantu:
Sabeka kulamagama ilandelana ayikho ezingeni ithalente namasevisi ifilimu, kodwa kuphela ngesisekelo yokuthi zonke lezi abaculi bamenyiwe ngezikhathi ukwenza Hollywood. Ngeshwa, cinema yethu kusenkingeni, nabanekhono abasha akuvamile esibukweni. Siyethemba ukuthi ngokuhamba kwesikhathi lesi simo zizoshintsha zibe ngcono.
Mhlawumbe wena ibhuntshiswa yokuthi kulesi sihloko sho akubona bonke abadlali abadumile. Kodwa selokhu ebhayisikobho yasungulwa, isibhakabhaka awo ovuthayo izinkanyezi eziningi kangaka egqamile! Kuyamangaza-ke yini ukuthi asikwazanga ukuzibala zonke kule Ukubuyekeza esifushane, akunjalo?
Ngifuna ukudlala ku-movie! Indlela ukukwenza? Agency ekusakazeni. Uba kanjani abadlali
Vitaly Doronin: Biography nama-movie
Umlingisi Victor Dobronravov: elandelayo ezinyathelweni zikayise
Izinhlobo nezinganekwane: i yiqhawe yisakhiwo sodumo. ekudalweni izinganekwane
Indlela ukudweba rocket-astronaut: igxathu negxathu Umhlahlandlela